တရုတ်နိုင်ငံက Jilin-1 စီးပွားဖြစ်ဂြိုဟ်တုများ လွှတ်တင် - Xinhua News Agency
Social, Education & Health မြန်မာ-ENG
တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ဆန်းရှီးပြည်နယ်ရှိ ထိုက်ယွမ်ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးစင်တာမှ ဂြိုဟ်တု ၈ စင်းပါဝင်သော အုပ်စုတစ်စုအား သယ်ဆောင်ထားသော Long March-2D ဒုံးပျံအား မေ ၅ ရက်တွင် လွှတ်တင်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ထိုက်ယွမ် ၊ မေ ၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသည် ဂြိုဟ်တု ၈ စင်းပါဝင်သော အုပ်စုတစ်စုအား အာကာသအတွင်း ထားရှိရန် Long March-2D ဒုံးပျံဖြင့် မေ ၅ ရက်တွင် လွှတ်တင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Jilin-1 Gaofen 03D နှင့်အတူ Jilin-1 Kuanfu 01C ဂြိုဟ်တုအား နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ဆန်းရှီးပြည်နယ်အတွင်းရှိ ထိုက်ယွမ်ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးစင်တာမှ ပေကျင်းစံတော်ချိန် နံနက် ၁၀ နာရီ ၃၈ မိနစ်တွင် လွှတ်တင်ခဲ့ပြီး မကြာမီအချိန်တွင် ကြိုတင်ချိန်ကိုက်ထားသည့်လမ်းကြောင်းသို့ ဝင်ရောက်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကျယ်ပြန့်သောသတင်းပေးပို့ချက်တို့နှင့်အတူ Jilin-1 Kuanfu 01C ဂြိုဟ်တုသည် အကျယ် ကီလိုမီတာ ၁၅၀ ကျော် ၊ ရောင်ခြည်စက်ဝန်းအတွင်းရှိ အရောင်အားလုံးကို ကူးယူထင်ဟပ်စေနိုင်သော ပုံရိပ်ပြတ်သားမှု ၀ ဒသမ ၅ မီတာ နှင့် သက်တံရောင်စဉ်မျိုးစုံ၏ ပုံရိပ်ပြတ်သားမှု ၂ မီတာ ရှိသော ပုံရိပ်များအား ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ ဂြိုဟ်တုသည် အလွန်ပမာဏကြီးမားသော သိုလှောင်မှု နှင့် မြန်နှုန်းမြင့် အချက်အလက်ပေးပို့နိုင်စွမ်း ရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
ယင်းဂြိုဟ်တုအား မြေသယံဇာတ ၊ ဓာတ်သတ္တု ရှာဖွေရေး နှင့် smart city တည်ဆောက်ရေး ကဲ့သို့သော ကဏ္ဍများအတွက် စီးပွားဖြစ်အဝေးထိန်းသိမြင်နားလည်ခြင်းအချက်အလက်ဝန်ဆောင်မှုများအား ထောက်ပံ့ရန် အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Chang Guang ဂြိုဟ်တုနည်းပညာကုမ္ပဏီမှ တီထွင်ထုတ်လုပ်သည့် ဂြိုဟ်တုသစ် ၈ စင်းသည် အုပ်စုတစ်စုအား ပုံဖော်ရန် Jilin-1 အစုအဖွဲ့၏ ယခင်လွှတ်တင်ခဲ့သည့် ဂြိုဟ်တု ၄၆ စင်းနှင့်အတူ လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး ၊ သစ်တောလုပ်ငန်း နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များတွင် အဝေးထိန်းသိမြင်နားလည်ခြင်းအချက်အလက် နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအား ထောက်ပံ့ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသည် Long March ဒုံးပျံစီးရီးများ၏ ၄၁၉ ကြိမ်မြောက် ပျံသန်းရေးမစ်ရှင် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
China launches Jilin-1 commercial satellites
TAIYUAN, May5(Xinhua) — China on Thursday launchedaLong March-2D rocket to placeagroup of eight satellites in space.
Satellite Jilin-1 Kuanfu 01C, together with seven Jilin-1 Gaofen 03D satellites, was lifted at 10:38 a.m. (Beijing Time) from the Taiyuan Satellite Launch Center in the northern province of Shanxi and soon entered the preset orbit.
With its wide coverage, Jilin-1 Kuanfu 01C can provide images withawidth of more than 150 km,apanchromatic resolution of 0.5 meters andamulti-spectral resolution of2meters. The satellite also boasts super-large storage and high-speed data transmission.
It will be used to provide commercial remote sensing data services for sectors such as land resource, mineral exploration and smart city construction.
Developed by Chang Guang Satellite Technology Co., Ltd., the eight new satellites will work with 46 previously launched satellites of the Jilin-1 family to formaconstellation, providing remote sensing data and services in fields like agriculture, forestry and environmental protection.
This was the 419th flight mission of the Long March rocket series. ■
Photo 1- A Long March-2D rocket carryingagroup of eight satellites blasts off from the Taiyuan Satellite Launch Center in north China’s Shanxi Province, May 5, 2022. Satellite Jilin-1 Kuanfu 01C, together with seven Jilin-1 Gaofen 03D satellites, was lifted at 10:38 a.m. (Beijing Time) from the Taiyuan Satellite Launch Center in the northern province of Shanxi and soon entered the preset orbit. (Photo by Zheng Bin/Xinhua)
Photo2– A Long March-2D rocket carryingagroup of eight satellites blasts off from the Taiyuan Satellite Launch Center in north China’s Shanxi Province, May 5, 2022. Satellite Jilin-1 Kuanfu 01C, together with seven Jilin-1 Gaofen 03D satellites, was lifted at 10:38 a.m. (Beijing Time) from the Taiyuan Satellite Launch Center in the northern province of Shanxi and soon entered the preset orbit. (Photo by Zheng Bin/Xinhua)
Photo3– A Long March-2D rocket carryingagroup of eight satellites blasts off from the Taiyuan Satellite Launch Center in north China’s Shanxi Province, May 5, 2022. Satellite Jilin-1 Kuanfu 01C, together with seven Jilin-1 Gaofen 03D satellites, was lifted at 10:38 a.m. (Beijing Time) from the Taiyuan Satellite Launch Center in the northern province of Shanxi and soon entered the preset orbit. (Photo by Zheng Bin/Xinhua)
Photo4– A Long March-2D rocket carryingagroup of eight satellites blasts off from the Taiyuan Satellite Launch Center in north China’s Shanxi Province, May 5, 2022. Satellite Jilin-1 Kuanfu 01C, together with seven Jilin-1 Gaofen 03D satellites, was lifted at 10:38 a.m. (Beijing Time) from the Taiyuan Satellite Launch Center in the northern province of Shanxi and soon entered the preset orbit. (Photo by Zheng Bin/Xinhua)
တရုတ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းတွင် ကျဉ်းမြောင်းသော ရေတွင်းထဲသို့ ကျသွားသည့် မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးကို ခက်ခက်ခဲခဲအောင်မြင်စွာ ကယ်တင်ခဲ့
ကမ္ဘောဒီးယား ၊ အင်ဒိုနီးရှား နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့က နိုဝင်ဘာလတွင် အရေးပါသော ခေါင်းဆောင်များ အစည်းအဝေး ၃ ခု ကျင်းပရန်ရှိ